Saameynta iyo otomaatigga | Martech Zone
Saameynta iyo otomaatigga
Axad, Juun 9, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Xiiso gelisay cutub ku jira Wadahadal qaawan, Waxaan go'aansaday inaan dib u qoro boggeyga maanta. Waxaan si fudud ugu yeeray Douglas A. Karr, suuq geynta dijitaalka iyo keydka macluumaadka. Runtii taasi wax badan kama oran cidda aan ahaa iyo waxa aan isku dayay inaan ku dhammaystiro balooggayga, in kastoo. Haduu qof wax ku qoro Quudinta 'Aaladda suuqgeynta', waan hubaa inaanan meelna kaga jirin liiska - in kasta oo ay aniga tahay dareenkeyga.
Waxaan isku dayay inaan si fudud u isticmaalo hal weedh qabasho laakiin waan waayay. Kadib dagaal dheer oo heesaha iyo qaamuuska hubinta, waxaan go aansaday inay jiraan 2 eray oo runtii soo koobay… saamayn iyo otomatig. Waxaan aaminsanahay ayaa ah in suuqgeynta wax ku oolka ah ay runtii u soo degto 2dan eray. Awoodda si wax ku ool ah suuqa waa inay saameyn ugu yeelataa qof inuu iibsado badeecada ama adeegga aad iibinayso. Otomaatiggu waa hab lagu sii wado hawsha dhammaan heerarka illaa laga dhammaystirayo.
Markaad lashaqeysay joornaalada, boostada tooska ah, joornaalada, telemarketing, web, blog iyo iimaylka dadaalada suuq geynta, had iyo jeer waxay aheyd sidii loo ilaalin lahaa wada hadalka qofka. Horteeda ku riix xayeysiis oo iska iloow iyaga, adiguna waad yaraynaysaa fursadahaaga inaad ku xidho iibka. Waxaad u baahan tahay inaad ku adkeysato, laakiin ixtiraam u yeelo baahiyaha qofka ama wuxuu doonayo.
Labaatan sano ka hor, muddo gaaban ka hor intaanan ku biirin Ciidanka Badda, waxaan ka shaqeyn jiray Bakhaarka Guriga. Waxay ahayd shaqo adag. Waxaan ahaa 'wiil badan', oo xamuulka ka qaadaya macaamiisha gawaaridooda iyo gawaaridooda magaalada Phoenix, Arizona. Laakiin waligay illoobi maayo casharkaygii ugu horreeyay ee Suuqgeynta halkaas. Maamulayaashu waxay ku dhiirigeliyeen dhammaan shaqaalaha inay weydiiyaan macaamiisha mashruucii ay ku shaqeynayeen. Tani way ka duwan tahay weydiinta, "Miyaan ku caawin karaa?". Taas, jawaabta fudud waxay noqon kartaa "Maya". Si kastaba ha noqotee, markii la weydiiyay mashruuca ay ka shaqeynayaan, macaamiisha badankood waxay bilaabeen wadahadal weyn oo ay la yeeshaan shaqaalaha waxa ay isku dayayaan inay ku guuleystaan. Tani waxay horseedday macaamiil faraxsan oo iibka la xiray.
Iyada oo loo marayo dhexdhexaadinta sida webka, wali waa wada hadal aan isku dayeyno inaan ku bilowno macaamiisheenna. Ku dhejinta websaydhka halkaas oo ay ku jiraan sawirro qabow waxay la mid yihiin inaad leedahay calaamadda qurxinta ee ka baxsan dukaankaaga. Laakiin waligeed ma qaadaneyso booska isgacan fiican iyo hello.
Moodooyinka xayeysiinta ee faragelinta ayaa wali jira. Meel kasta ku dheji xayeysiiska qofna wuu arki karaa mid waxna wuu iibsan karaa. Si kastaba ha noqotee, internetku wuxuu keenaa dhexdhexaadiyeyaal aad u wanaagsan oo lagula hadlo rajooyinkaaga iyo macaamiishaada. Blogs, RSS, Email, Foomam, Madasha Websaydhka, iyo Raadintu waa dhammaan dadaallo suuq geyn ah. Inta badan ee aad ku xidhi karto oo aad otomaatig uga dhigi karto dadaalkaaga suuq-geynta, ayaa si fiican u wada sheekaysiga u dhexeeya adiga iyo rajooyinkaaga, iyo sida ugu wanaagsan ee ganacsigaagu u horumari doono.
Waa wax walba oo ku saabsan saameyn iyo otomatig. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay cinwaanka cusub!
Tags: qalabayntadouglas karrsaamayntasaamaynta iyo xaraashkaRobert scobleShel Israel
Waa maxay sababta warshadaha filimku u fashilmaan, taxanaha
Diyaaradaha aan Duuliyaha laheyn ee Droneska